Domperidone Ọgwụ - China Ningbo Second Ókè mmiri ọgwụ
Operation Manual of Domperidone Ọgwụ Veterinary 【Name of Veterinary Drug】 【Common aha】: Domperidone Ọgwụ 【English Name】: Domperidone Ọgwụ 【Aha Pinyin】: Duopanlitong Zhusheye 【Major mgwa】: Domperidone 【Description】: Ngwaahịa a bụ colorless doro anya mmiri mmiri 【pharmacological Action】: Ọ bụ a dopamine ihe nnabata-eti ọkpọ; Domperidone nwere ike ịkwụsị dopamine si igbochi azu atọhapụ nke GTH na ovulation nakwa dị ka ike LHRH-A2 na sGnRH-A ime GT ...
Operation Manual of Domperidone Ọgwụ
【Common aha】: Domperidone Ọgwụ
【English Name】: Domperidone Ọgwụ
【Aha Pinyin】: Duopanlitong Zhusheye
【Major mgwa】: Domperidone
【Description】: Ngwaahịa a bụ colorless doro anya mmiri mmiri
【Pharmacological Action】: Ọ bụ a dopamine ihe nnabata-eti ọkpọ; Domperidone nwere ike ịkwụsị dopamine si igbochi azu atọhapụ nke GTH na ovulation nakwa dị ka ike LHRH-A 2 na sGnRH-A ime GTH atọhapụ na ovulation.
【Egosi】: Ọ nwere ike na jikotara aka wee mee na LHRH-A 2 maka keakamere itinye n'ọkwa nke empathema na ovulation maka azụ
【Ojiji na Ọnụọgụ ọgwụ】: Akpa, itughari ngwaahịa a na a kwesịrị ekwesị ego nke nkịtị saline ruo mgbe ọ bụla milliliter mmiri nwere 5 ~ 10mg domperidone. Nke abuo, mix LHRH-A 2 maka ọgwụ na ụfọdụ nkịtị saline ka a LHRH-A 2 ngwọta na a ịta nke 5 ~ 20μg / ml. Kpatụ chọrọ onunu ogwu na mix n'elu abụọ ngwọta. Mgbe ahụ, tinye na ngwakọta maka intraperitoneal injection (isi nke pectoral nku azu) ma ọ bụ intramuscular ogwu ogbugba (nso na isi nke dorsal nku azu). The onunu ogwu maka nwanyi azụ kwa kilogram bụ dị ka ndị:
azu kaapu, crucian azu kaapu ahihia azu kaapu chub, bighead dace bream clarias fuscus loach megalobrama amblycephala Erythroculter ilishaeformis
Black azu kaapu kwesịrị abụọ injections. The onunu ogwu nke mbụ ọgwụ: DOM 5mg + LHRH-A 2 5μg; nke abụọ ọgwụ e nyere 24 ~ 48 awa mgbe e mesịrị na a onunu ogwu nke DOM 5mg + LHRH-A 2 10μg.
Nwoke nne na nna azụ naanị kwesịrị 1/2 nke usoro onunu ogwu maka n'elu nwaanyị nne na nna azụ
【Oghom Drug Mmeghachi omume】 No oghom ọgwụ mmeghachi omume a na-hụrụ ma ọ bụrụ na ndị na-atụ aro usoro onunu ogwu na-agbaso.
【Ihe Mkpa nti】:
1. Parent azụ iji ngwaahịa a na-machibidoro iwu na-eri site na ndị mmadụ
2. Ọ nwere ike hụ mma nrụpụta na a mmiri okpomọkụ nke 20 ~ 30 ℃. Ọ bụrụ na mmiri okpomọkụ bụ ala karịa 20 ℃, na ihe na-akpata itinye n'ọkwa ga-ubé emetụta.
3. elu gabiga ókè onunu ogwu nwere ike iduga n'oge ovulation na a ga-emetụta ya ọmụmụ ọnụego.
4. Ọ bụ mma iji kwadebe ọgwụ n'ihu iji ya. The njikere ọgwụ ga-agbara n'ime 0.5-1 hour.
【Nkọwapụta】: 2ml: 100mg
Previous: Onyinye S-GnRHa N'ihi Ọgwụ (Ovuhom)
Osote: LHRH-A2 maka Ọgwụ Fish ojiji
trout Ugbo homonụ N'ihi Fish ozuzu Ovaprim, Mma-akpata Ovaprim